पाँच महिना पछी बौरको बाटो खुल्यो - जलजला अनलाईन
जलजला अनलाईनप्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर २२, सोमबार (१ साल अघि)
२१७५ पटक पढिएको
पाँच महिना देखि बन्द रहेको जलजला बौरको बाटो आइताबरदेखी खुलेको छ . गत असारमा कालिगण्डकीनदीमा आएको बाढीले माटेपानीको बाटो पुरै बगाएको थियो . बाढीले बाटो बगाएपछी पर्बत बौरका बासिन्दाले ढुवानी तथा ओसार पोसारको लागि जिर्ण अवस्थामा रहेको झोलुंगेपुल प्रयोग गर्नु परेको थियो .
करिव २५० घर धुरी रहेको जलजलाको वडा नं २ र ३ घना बस्ति बिकासको क्रममा छ तर बाटो निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो . जलजलाको बासखर्क-बेनी सडक खण्डको सबैभन्दा छोटो र सजिलो बाटोमा पर्ने यो खण्ड करिव २ लाख रुपियाको खर्चमा अस्थाई रुपमा खोलिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम गिरीले बताए .
जलजला गाउँपालिकाले जम्मा २ लाख रुपैया बजेट छुट्ट्याएपछी “त्यति न्युन खर्चमा कसरि बाटो बन्न सक्थ्यो र केहि ग्याबिन जाली भर्न मै सकिन्थ्यो कसरि बाटो बनाउने ? तर अस्थाई रुपमा भएपनि तत्कालका लागी समस्या समाधान गर्न खोलाको तिरबाटै गाडी आवजावत गर्न सकिने बाटो बनाइएको छ” समितिका कोषाध्यक्ष देबी जिसीले बताईन . दिर्घकालिन रुपमा हैन काम्तिमा पनि खोला बढ्ने बेला, जेठ महिना सम्म भए पनि बाटो संचालनको उपाए गरिएको छ यति बजेटले कसले काम गर्न सक्थ्यो र गिरीले भन्नु भयो बाटो खुले पछी बौरबासि खुसि भएका र निर्माणको कार्यले तिब्रता पाउने छ .
बाटोको स्थायित्वको लागी जलजला १ २ र ३ का जनप्रतिनिधि हरुले चासो दिनु पर्ने स्थ्यानियहरु बताउदछन . हाल बौर, बेनी बजारमा ब्यबसाय तथा रोजगारी गर्नेहरुको आवासको लागी रोजाईमा पर्नेगरेको छ .